Diyaarad Mareykan ah oo duqeyn ka fulisey gudaha dalka Liibiya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Diyaarad Mareykan ah oo duqeyn ka fulisey gudaha dalka Liibiya.
On Feb 20, 2016 194 0
Wararka naga soo gaaraya dalka Liibiya ee muslimka ah ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maalintii shalay duqeyn xoogan ay ka dhacdey magaalada Sibraata ee gobolka Dharaabulis oo ay gacanta ku hayaan Mujaahidiinta dowladda Islaamiga ah.
Duqeynta oo ahayd mid xoogan ayaa waxay wararku sheegayaan iney fulisey diyaarad laga leeyahay dalka Mareykanka, taas oo dhowr saaruukh ku garaacdey guri ku yaalay bartamaha magaalada Sibraata loona badinayo iney ku sugnaayeen Dhalinyaro Mujaahidiin ah.
Saraakiil Mareykan ah oo diidey in magacooda la shaaciyo ayaa sheegay in diyaaradahooda droneka ay duqeyn ka fuliyeen gudaha dalkaas Liibiya, ayna beegsadeen dagaalyahano katirsan ISIS oo ku sugnaa guriga la beegsaday.
Wargeyska WashightonPost ayaa dhankisa isagoo xiganaya Saraakiil Mareykan ah xaqiijyey in duqeyntu ay fuliyeen dowladooda Mareykanka.
Inta haatan la ogyahay waxaa duqeyntaas ku dhintay ugu yaraan 41 Ruux, halka tiro kalana ay dhaawcmeen, waxaana lasoo sheegayaa in burbur xoogan uu soo gaaray dhismooyin ka ag dhawaa guriga la beegsaday.
Magaalada Sibraata ayaa masaafo dhan 70km waxay galbeedka kaga beegantahay magaala madaxda dalkaas ee Tripoli halkaas oo ay ka taliso koox lagu magacaabo Fajru Liibiya.
Duqeyntan ayaa noqoneysa tii ugu horeysay oo noocan ah oo ka dhacda dalka Liibiya, waxaana muuqaneysa in Dowladda Mareykanka ay markan tarkiizka saareyso awooda Jihaadiga ah ee kasoo ifeysa wadanka Liibiya.